मुख्यमन्त्रीको आक्रोस : 'लोकसेवा आयोगका आयुक्त नै बेईमान र फटाहा छ ' !
उनले बलियो भएर प्रदर्शन भएपछि मात्र अधिकार सुनिश्चित हुने दोहरयाएका थिए ।
प्रकाशित मिति : २१ जेठ, २०७६ , १६:५६:०० बजे
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री मो. लालबाबू राउत गद्दीले लोक सेवा आयोगका आयुक्त नै बेईमान र फटाहा रहेको बताएका छन् ।
जनकपुरमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले लोक सेवा आयोगका आयुक्त बनेर बसेका व्यक्ति पैसाको लोभ लालचमा कुनै एक समुदायलाई लोकसेवामा राख्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, कुनै एक जातीय समुदायलाई लोकसेवाले भर्न खोजेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना प्रदेश सरकारले गर्नेछ, यसमा संघीय सरकारले गर्नुपर्दैन ।
छुवाछुत मुक्त राष्ट्र नेपाल घोषणा दिवसको अवसर पारेर दलित सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले मँगलबार जनकपुरमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय दलित अगुवा भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले मधेशीसँग सरकारले विभेद गरेकोले आवश्यक परे काठमान्डौंसम्म लडनुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
उनले भने, मधेशीहरुसँग अन्याय गरेको छ संघीय सरकारले , आवश्कता परे सडक संघर्ष गर्नुपर्छ र काठमान्डौंसम्म प्रदर्शन गर्नुपर्छ । मेरो आग्रह छ की आफ्नो अधिकारको लागि लडनुपर्छ, संघर्ष गर्नुपर्छ आजको यही आवश्यकता छ , तब मात्र गएर तपाईको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ । लोकसेवा एउटा ट्रेलर मात्र छ ।
विगतमा संघीयता विरोधी तत्वहरु अहिले संघीयतामा गएको भन्दै आफूहरुको लागि दुर्भाग्पूर्ण रहेको आरोप लगाए । संघीयताको मर्मलाई अँगालेर अघि बढनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको दुःखेसो पोख्दै प्रदेश सरकारको आफ्नै लोकसेवा आयोग गठन भएपछि संघीय सरकारले पुनः प्रदेशलाई कर्मचारी नपठाउने दाबी उनले गरे । उनले भने,- 'प्रदेश नं. २ को हरेक स्थानीय तहमा पदपूर्तिको लागि प्रदेश सरकारले स्वयंम कर्मचारी भर्ना गर्नेछ र पदपूर्ति पनि गर्नेछ ।'
एक अर्को प्रसंगमा उनले अधिकार प्राप्तीका लागि दलितहरुलाई आफै सशक्त हुनुपर्ने बताउँदै दलितहरु आफै सशक्त नभए सम्म अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने बताए ।
प्रदेश सरकार दलित मैत्री रहेको दावी गर्दै उनले दलितहरुको , दलित सशक्तिकरण ऐन, छात्रवृति योजना, दलित छात्रावासको निर्माण जस्ता कार्यहरुलाई अघि बढाई सकेको उल्लेख गरे ।
सदनमा छलफलको क्रममा रहेको दलित सशक्तिकरण ऐन विश्वकै नमूना रहेको दावी गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले ऐन पारित भएपछि दलितहरुको स्वास्थ्य, शिक्षाको ज्ञारेन्टी प्रदेश सरकारले दिने बताए ।
अवको दिनमा दलितहरुले आफनो को र परायाको भने छुट्याउने बेला आइ सकेको जिकीर गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले २०४७ सालको परिवर्तन पछि दलितहरुले के पायो भन्ने प्रश्न आफै संग गर्न आग्रह समेत गरे ।
दलित अगुवा उमेश विसुन्केको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार चन्द्र किशोर सहित प्रदेश भरिका दलित अगुवाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।